Tirakoob: Howlgalladii Jihaadiga ee sanadkii 2018-ka ka dhacay Afqanistaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Tirakoob: Howlgalladii Jihaadiga ee sanadkii 2018-ka ka dhacay Afqanistaan.
On Jan 5, 2019 207 0
Lajnada warfaafinta ee Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa soo bandhigtay tirakoob rasmi ah oo lagu soo gudbiyay howlgalaldii Jihaadiga ee sanadkii 2018-ka ka dhacay guud ahaan wadanka Afqaanistaan.
Taqriir ka kooban dhowr bage oo lagu baahiyay baraha Internetka, islamarkaana ay soo saartay Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa lagu sheegay in sanadkii 2018-ka uu ahaa sanadkii guuldarada istiraatiijiyadda Maraykanka, waxaana Imaaradu sheegtay in bilowgii sanadkaas ay Maraykanku ku daah fureen duqeymo joogta ah, iyo weeraro lagu beegsanayo dadka muslimiinta, balse dhamaadkiisa Allaah fadligii uu ka dhigay sanad fashil iyo guuldarro qaraar.
Mujaahidiinta ayaa si adag, oo qorsheysan, iyagoo Allaah kaashanaya uga hortagay qar iska xoornimadii Ameerikaanka iyo kaaliyaashooda, waxayna gumeystaha ku qasbeen inu dib u eegis ku sameeyo istiraatiijiyada uu ku wajahayo dagaalka sii dabadheeraaday ee ka socoda dalka muslimka ah ee AFqaanistaan.
Tirada howlgallada ay Mujaahidiintu ka fuliyeen dalka Afqaanistaan 2018-kka waxay gaareysaa 10638 howlgal, waxaana si isku mid ah howlgalladan loogu beegsaday ciidamada Shisheeyaha ee uu hogaamiyo Maraykanka iyo malleeshiyaadka xukuumadda Kaabul.
Waxaa xusid mudan 30 kamid ah howlgalladan iney ahaayeen camaliyaad istish-haadi ah oo ay fuliyeen naftood hurayaal katirsan Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan.
Askarta NATO ee sanddii lasoo dhaafay Afqanistan lagu dilay tiradoodu waa 249 askari waxaana ubadan ciidamo American ah halka ,153 askari ay dhaawacmeen.
khasaaraha ugu badan wuxuu howlgallada Mujaahidiinta kasoo gaaray ciidamada xukuumadda kaabuul oo sanad gudihiis laga dilay 22,594 askari, ciidamadaas ayaa isugu jira,boolis,kumaandoos,sirdoon iyo malleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal oo dhamantooda hoostaga xukuumadda kaabul, dhaawacoodana wuxuu gaaray 14063 askari, sida lagu sheegay tirakoobka ay soo saartay Imaarada islaamiga ee Afqaanistan.
514 ruux oo kamid ah kumanaanka kun ee xukuumadda Kaabul looga dilay Afqaanistaan, waxay ahaayeen saraakiil sar sare oo shisheeyaha ku hagi jiray duulaanka ay kusoo qaadeen dhulka sharecada lagu maamulo ee AFqaanistaan.
Gaadiidka gaashaaman ee ay mujaahidiintu gubeen sanaddii lasoo dhaafay 2018 ayaa gaaraya 3613 gaari oo aha nooca loo yaqaano Hamfiga, iyo sidoo kale nuucyada Ranjarka iyo gawaari kale oo ay dowladda Maraykanka ku daabushey Afqaanistaan si loogu gumaado musliminta iyo mujaahidiinta.
Dhinac kale, waxay ciidamada imarada islaamiga ee Afqaanistaan ku guuleysteen iney dhulka soo dhigana 26 diyaaradood oo 8 kamida ay ahaayeen kuwa aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaano, halka 17-na ay ahaayeen diyaaradaha qumaatiga u kaca ee hellocopterska, halka diyaarad kalana ay ahayd noocyada waaweyn ee shixnadaha hubka qaada, taas oo gebi ahaanba ay mujaahidiintu basbeeliyeen.
Intii lagu guda jiray sanadkii lasoo dhaafay ee 2018-ka, waxay Imaarada islaamiga ee AFqaanistana xureysay 29 magaallo oo kamid ah degmooyinka gobollada kala duwan ee dalka Afqaanistaan, inta badan magaalooyinkaas waxa lagu maamulayaa shareecada islaamka, iyadoo ay jiraan tiro aad u yar oo ay mujaahidiintu dib uga soo gurteen, sababo milliteri awgeed.
Tirakoobka Imaarada islaamiga ee Afqaanistana waxaa lagu sheegay in hadda ay mujaahidiintu maamulaan 61 magaallo oo hoostaga 21 kamid ah gobollada wadanka Afqaanistaan.
Jihaadka 18 sano jirsaday ee ka socda dalka Afqaanistaan, loogana soo horjeedo gumeysiga uu Maraykanku doonayo inuu geliyo dalkaas ayaa qarka u saran guul dhameysitran, taas oo ka dhigan in Maraykanka isagoo jabay isaga baxo guud ahaan wadanka.
Towfiiqda Allaah kadib, mirahan bislaaday waxaa lagu helay nafhurka ciidamo daacad ah, sugnaanta hogaamiyaal haldoor ah, iyo shacab muslim ah oo naf iyo maalba la garab istaagay wiilashiisa mujaahidiinta ah, waxaana 18 sano kadib uu Maraykanku isagoo dulleysan codsanayaa in si ka fool kafool ah ula hadlo mujaahidiinta, marka ay ciiidamadiisu ka baxayaana Afqaanistaan aan wax dhib ah la gaarsiin.